Basic Housing Changed the Lives of a Single Father and His Son - McKnight Foundation
Aagga Aagga Aagga Waqooyi
The Aagga Aagga Aagga Waqooyi (NAZ) ayaa ka shaqaynaya sidii loo hubin lahaa in dhammaan carruurta ku nool juqraafi ah "Zone" ee Waqooyiga Minneapolis ay ka qalin jabiyaan dugsiga sare ee loogu talagalay kuleejka. NAZ wuxuu qaadaa hab laba-jihaad ah, oo si toos ah ula shaqeeya carruurta iyo waalidkood, taageeraya waalidiinta si ay u dejiyaan guryaha iyo shaqooyinka iyo inay noqdaan hoggaamiyayaal bulshada ka tirsan oo wata isbeddel bulsho oo muddo dheer socota. NAZ wuxuu qaataa miisaaniyad McKnight ah oo loogu talagalay taageero guud iyo barnaamijyada waxbarashada iyo barashada.
Xilliga qaboobaha ee 2013, Keenan-oo ah guri kiro ah oo ka soo jeeda haweeney ka soo carartay magaalada iyada oo lacagta kiro bixisay, ka tagtay Keenan iyo wiilkiisa sagaal jirka ah ee ku xayiran qolka ijaarka ah oo kuleylka kaliya ee ka yimid labadaas kuleyliyaha ah ee Keenan ayaa iibsaday. Keenan waxay NAZ u heshay caawimaad waxayna ku xidhnayd NAZ's Navigator Housing, oo markaa ku xidhay Urban Homeworks, oo ah hay'ad iskaashatey NAZ. Urban Homeworks wuxuu la shaqeeyay Keenan si uu u helo guryo cusub oo cusub oo lala yeesho hay'ad kale oo NAS ka shaqeysa, Mashruuca Lacagta Nolosha, oo uu kireeyo kiradiisa iyada oo loo marayo Maalgelinta Dammaanadda Dammaanadda. Bishii Luulyo 2014, Keenan iyo wiilkiisa waxay u guureen gurigooda cusub.
Iyada oo taageero ka heleysa ururka NAS ee Iskaashiga Bulshada, Keenan wuxuu sidoo kale awooday inuu dhammaystiro barnaamijka dhismaha 20-usbuuc oo ka dhacaya Summit Academy iyada oo loo marayo barnaamijka Shabakada Ganacsiga Workforce Investment (WIN). Bishii Sebtembar 30, Keenan ayaa ka qalinjebisay barnaamijka dhismaha iyada oo ujeedadu ahayd in laga shaqeeyo garoonka Vikings. Wiilkiisa, hooyadiis, gabadha saaxiibka ah, iyo xiriiriyaha NAZ waxay halkaas u joogeen si ay ugu dhiiradaan isaga markii uu tagay garoonka. Degganaanta guryaha iyo tababarka shaqada ayaa muhiim u ah sameynta guri caafimaad qabta si ay u taageeraan guulaha waxbarasho ee ardayga. Marka waalidiinta la taageero, carruurtu waa la taageeraa.
Beddelidda Deriskaaga si ay qoysaska u dhoofaan